वादल नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो - Jhilko
वादल नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टी एकताका लागि गठन गरेको रामबहादुर थापा ‘वादल’ को नेतृत्वको कार्यदलले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई आज प्रतिवेदन बुझायो । बालुवाटारमा बुझाइएको प्रतिवेदनका बारेमा छलफल चलिरहेको छ ।
पुस मसान्तभित्र पार्टी एकीकरण र सांगठनिक संरचना बुझाउने जिम्मेवारीसहित गठित रामबहादुर थापा‘बादल’ नेतृत्वको कार्यदलमा महासचिव विस्णु पौडेलसहित नौ जना सदस्य छन् । बादल नेतृत्वको यो कार्यदल अघि एकता प्रक्रिया अघि बढाउन विभिन्न तहमा तीनटा कार्यदल बनाइएको थियो ।
सबै विषयमा छलफल टुंग्याउन प्रयास गरेको सो कार्यदलले १० प्रतिशत थप्ने कार्यलाई अध्यक्षद्वयको जिम्मा लगाउँदै प्रतिवेदन बुझाउने छ । पार्टीको आन्तरिक समस्याका कारण यो टुंग्याउन तत्काल समस्या भएको जनाइएको छ । कार्यदलले पार्टीका विभिन्न तहमा छलफल गरी यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
बालुवाटारमा बसेको पार्टीको यो बैठकमा देशभर द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँत्याउने क्रियाकलापप्रति चिन्ता जाहेर गर्दै यसबारे ठोस निर्णय गर्न छलफल चलिरहेको स्रोतले जनायो । यो बैठकबाट यसबारे ठोस निर्णय लिइने वालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय डा. गोविन्द केसीको अनसनका नाउँमा समेत राजनीति गर्नेहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई चर्काउन थालेपछि यस विषयमा तत्काल समाधान नखोजिए पार्टीलाई थप संकट सिर्जना गर्न सकिने देखेर पार्टीका नेताहरूले यसबारे ठोस निर्णय गर्न बैठक बसेका हुन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पार्टी नेतृत्वलाई अप्ठयारो पार्न सकिए आफ्नो दुनो सुल्झिने गरी च्याँखे थापेकाहरू सक्रिय भएकाले द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे ठोस निर्णय गर्नु आवश्यक भएको छ ।
पुस १२ गते बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकबाटे संगठनात्मक एकीकरणको बाँकी कामको खाका तयार पार्ने, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो गठन, विधान परिमार्जन, प्रदेश कमिटी गठन समीक्षासहित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी गृहमन्त्री समेत रहेका बादलको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट, बेदुराम भुसाल, शंकर पोखरेल र रघुवीर महासेठ सदस्य रहेका छन् ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता घोषणा भएको ९ महिना बित्न लागेको छ । पार्टी एकता घोषणापछि नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल, माधवकुमार नेपाललगायत शीर्ष नेताले तीन महिनाभित्र पार्टी एकता टुंगो लगाउने बताएका थिए ।
तर पार्टीका विभिन्न निकायको एकीकरणले पूर्णता पाउन नसकेकाले सरकारको कामको प्रभावकारिताबारे समेत अन्यौलता सिर्जना भएको छ । प्रतिपक्षीहरू पनि पार्टी र सरकारप्रति आक्रामक हुन थालेको देखिएकोले पार्टी एकीकरणको बाँकी काम सक्दो चाँडो टुंग्याउन पार्टी नेतृत्वप्रति दबाब परेको छ ।
शेयरबजारमा घट्दो मूल्य, बढ्दो नाफा कसरी सुरक्षित गर्ने ?
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–१० रिट्ठाबोटे बस्ने २५ वर्षीय नवीन राईलाई एकनाले भरुवा बन्दुक...
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बुधबार सम्पन्न विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेञ्ज...
मंगलबारको कारोबारमा ११४०.२१ विन्दु वरिपरि घुमिरहेको थियो भने शेयरबजारमा खासै उतारचढाव...
चुनौतिलाई छिचोल्दै अगाडि बढेको गर्विलो साख
औद्योगिक क्षेत्रमा नीतिगत रुपमा ठूला सुधार भएका छन् । यस्ता सुधारबाट हुने नतिजा...